Edere site Tranquillus | Sep 19, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ihe ndekọ ego bụ otu n'ime uru onye ọrụ ga-erite na ụlọ ọrụ. Nke a bụ ụdị nkwa nke onye were gị n'ọrụ nyere ndị ọrụ ya ka ha nwee ike ịnụ ụtọ ụbọchị ezumike ha ma zuo ike anaghị ewere ya. Iji tufuo ya, a ga-agbaso usoro ụfọdụ ma arịrịọ bụ iwu. Ndị a bụ ụfọdụ akwụkwọ ozi maka iji akaụntụ nchekwa oge. Mana mbu, ụfọdụ echiche banyere uru a ga-aba uru.
Kedu oge akaụntụ nchekwa ego?
Ihe ndekọ ego oge ma ọ bụ CET bụ sistemụ nke ụlọ ọrụ hibere maka abamuru nke ndị ọrụ ya ka ha wee nwee ike irite uru site na nchịkọta nke ikike ịhapụ ezumike. Enwere ike ịrịọ ndị a ma emechaa, ma n'ụbọchị ma ọ bụ n'ụdị nkwụghachi ụgwọ nke onye ọrụ ahụ nwere ike itinye na akaụntụ nchekwa oge.
Agbanyeghị, ịtọlite ​​oge nchekwa oge na-esite na nkwekọrịta ma ọ bụ nkwekọrịta mkpokọta. Nkwekọrịta a ga-edozi ọnọdụ nke ọkọnọ na ojiji nke CET dị kaederede L3151-1 nke Usoro oru. Onye oru nwere ike iji ya kpokọta ikike ezumike ya anaghị ewere site na ịrịọ onye were ya n'ọrụ arịrịọ.
Kedu uru nke akaụntụ nchekwa oge?
Uru nke akaụntụ nchekwa oge nwere ike ịbụ maka onye were gị n'ọrụ na maka onye ọrụ.
Uru maka onye were gị n'ọrụ
Tọlite ​​oge nchekwa ego na-eme ka o kwe omume belata uru ụtụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ maka onyinye nke ụbọchị ebubatara na CET. Nke ikpeazụ a na-enyekwa onye were gị n’ọrụ ike ịkwali ma jigide ndị ọrụ site n’ikwe ka ha rite uru na ọnọdụ ndị ahụ dịka mkpa ha si dị.
GỤỌ Mma gị na ịde ịke: ezi uche njikọta
Uru maka onye ọrụ ahụ
CET na-enyekarị onye ọrụ ohere irite uru na atụmatụ nchekwa ezumike nka yana ikike ịhapụ ya. Enwekwara ike ịhapụ ụtụ isi ego, kwụrụ ụgwọ ịkwụsị ọrụ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ịhapụ.
Kedu otu esi ahazi oge nchekwa ego?
Enwere ike ịtọ akaụntụ oge nchekwa na ndabere nke nkwekọrịta ụlọ ọrụ ma ọ bụ mgbakọ ma ọ bụ site na mgbakọ ma ọ bụ ngalaba alaka ụlọ ọrụ. Yabụ, na nkwekọrịta a ma ọ bụ nkwekọrịta a, onye were gị n'ọrụ ga-ekwurịrị n'iwu na-achịkwa akaụntụ nchekwa oge.
Mkparịta ụka metụtara metụtara usoro njikwa akaụntụ, ọnọdụ ego akaụntụ na usoro ojiji nke akaụntụ nchekwa oge.
Etu esi enweta ego ma jiri oge nchekwa ego?
Enwere ike ịnweta ego nchekwa oge ma ọ bụ n'oge ma ọ bụ ego. Enwere ike iji ikike niile echekwa n'oge ọ bụla. Agbanyeghị, ntinye nke CET chọrọ arịrịọ n'aka onye were gị n'ọrụ ma ọ bụrụhaala na a na-akwanyere akụkụ ndị ahụ ugwu.
Na ụdị oge
Enwere ike iji ego maka CET kwụọ ụgwọ maka izu nke ise, ezumike zuru oke, oge ma ọ bụ RTT maka ndị ọrụ ọnụahịa akwụghị ụgwọ. Ihe a niile iji tụọ anya ezumike nka, iji kwado ụbọchị anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ iji nwayọ gaa ọrụ nwa oge.
Na ụdị ego
Onye oru nwere ike irite uru site na ikike ịhapụ ya n'ụdị ego. Banyere nke ikpeazụ, enwere onyinye onye were gị n'ọrụ, mmụba ụgwọ ọnwa, ụgwọ dị iche iche, ụgwọ ọrụ, ego echekwara n'ime PEE. Agbanyeghị, ezumike kwa afọ enweghị ike ịgbanwe n'ime ego.
GỤỌ Ụdị nkwanye ùgwù a na-ahụkarị na-enwekarị ihe anọ
Site na ịhọrọ nhọrọ a, onye ọrụ ahụ nwere ike irite uru site na ego ọzọ. O nwekwara ike nyefee PEE ya ma ọ bụ PERCO ya iji kwado atụmatụ nchekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ezumike nka otu.
Modelsfọdụ ụdị nke akwụkwọ ozi na-arịọ ka e jiri oge nchekwa ego
Ndị a bụ ụfọdụ akwụkwọ ozi iji nyere gị aka ịrịọ maka ego site na CET na ezumike ezumike, ego ego ma ọ bụ RTT na arịrịọ iji jiri oge nchekwa ego.
Ego nke a ego oge akaụntụ
Lọ ọrụ… (Aha ụlọ ọrụ)
(Obodo), na… ()bọchị)
Isiokwu: Inye ego na nchekwa oge m
Monsieur na Directeur,
Dika ihe edere ederede nke edere na anyi dere na ụbọchị edere, ị rịọrọ ndị ọrụ niile ka ha rite uru site na ezumike kwa afọ site na oge tupu [ụbọchị iji kwụọ ụgwọ ezumike].
Na mgbakwunye, n'ihi ọpụpụ nke ezumike ụfọdụ ndị ọrụ na iji hụ na ọrụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma, yabụ enweghị m ike iwepụ ezumike m akwụ ụgwọ m, ya bụ [ọnụọgụ ụbọchị ezumike akwụ ụgwọ fọdụrụ] ụbọchị.
Nke ahụ kwuru, dị ka isiokwu L3151-1 nke Usoro Ọrụ, a kpọtụrụ aha na m nwere ike irite uru na ezumike ndị a akwụ ụgwọ n'ụdị ego. Ya mere, ana m ewere nnwere onwe nke idegara gị akwụkwọ ugbu a ịjụ gị maka ịkwụ ụgwọ nke nguzo m kwekọrọ na ezumike ndị a n'ime oge nchekwa ego m.
Na-echere nzaghachi dị mma n'aka gị, biko nara, Sir, mmetụta nke echiche m kachasị elu.
Iji ikike e kenyere na oge nchekwa ego
Isiokwu: Jiri nke oge m ego akaụntụ
O ruola afọ ole na ole kemgbe e debere akaụntụ ego m. N'ihi ya, enwere m ike ịnakọta [ego nke nguzozi na CET] euro, nke bụ otu ụbọchị nke ụbọchị ezumike.
Site na nke a, na dịka edemede L3151-3 nke Usoro Ọrụ, m ga-achọ ịgwa gị nke m chọrọ ịkwụ ụgwọ ọrụ n'ime otu ọrụ ebere site na ikike m nwetara na oge nchekwa ego m.
Daalụ maka ịme ihe dị mkpa ozugbo enwere ike. Agbanyeghị, enwere m ikike maka ozi ọ bụla ọzọ.
Biko kwere, Maazị Director, ekele m.
Budata "Enye ego akaụntụ nchekwa oge"	Food-account-savings-time.docx – Ebutere ugboro 720 – 13 KB
Budata “nhazi akwụkwọ ozi akaụntụ nchekwa oge”	model-of-letter-of-account-savings-time.docx – Ebutere ugboro 774 – 22 KB
Download oge nchekwa akaụntụ akaụntụ ndebiri Ọnwa Abụọ 13, 2022Tranquillus
gara agaChepụta akwụkwọ ozi arịrịọ maka Mgbapụta Onwe Gị
-esonụEnweghị isi nke nkwekọrịta nkwekọrịta na enweghị nnyefe nke otu onye ọrụ